Monday June 21, 2021 - 09:23:43 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay xukuumadda Pakistan ayaa ka hadashay wararka sheegaya in ay saldhig melleteri siin doonto dowladda Mareykanka marka ay ciidamada American-ka ah isaga baxaan dalka Afghanistan.
Cimraan Khaan oo ah R/wasaaraha Pakistan ayaa wareysi uu siiyay warbaahin laga leeyahay Mareykanka wuxuu ku sheegay in ay been yihiin wararka sheegaya in islam'abaad ay martigelin doonto CIA-da si ay ubaacsato jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala bartamaha Aasiya.
Pakistan waxay sheegtay in haddii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay isaga insixaabaan wadanka ay yaraan doonaan dhibaatada shacabka kasoo gaaraysa duqeymaha.
Hoggaamiyaha Pakistan ayaan ku dheeraan ka hadalka arrintan ah in ay saldhig siinayaan CIA-da balse sooma hadal qaadin dhawaqii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha Turkiga ee ahaa in ciidamdiisu sii joogi doonaan Afghanistan haddii kuwa Pakistan ay kala qeyb qaataan howlgalka cusub ee laga fulin doono dalka ay dagaalladu daashadeen ee Afghanistan.
Xukuumadda daalimadda ah ee fadhigeedu yahay magaalada islam'abaad ayaa sanadadii uu xilka hayay Pervez Musharraf waxay si indha la'aan ah uga qeyb qaadanaysay duullaanka saliibiga ah ee lagu qaaday Afghanistan.
Lama oga sida ay Pakistan uga dhabayn karto diidmadeeda ah in ay saldhig melleteri siiso ciidamada Mareykanka ee kusoo jabay dagaalka Afghanistan.
Dowladda Imaaraatka oo Safaarad ka furatay caasimadda maamulka Yahuudda.
Sarkaal katirsanaa 'Nabad Sugidda' dowladda oo Afgooye lagu dilay.